Kaka oo AC Milan keenaya Cayaaryaahnkii Koobaad? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kaka oo AC Milan keenaya Cayaaryaahnkii Koobaad?
(10-9-2018) Cayaaryahankii hore ee kooxda Kubada Cagta AC Milan Kaka oo dhawaan ka mid noqdey Maamulka Milan ayaa lasheegayaa in ay keeni doono Cayaaryahankiisii koobaad kaas oo uu dhawaan kula kulmay dalka Braziil.
Ricky Kaka ayaa lasheegayaa in uu keeni doono Cayaaryahan lagu Magcaabo Lucas Paqueta.kaas oo u dheela kooxda dalka Braziil ee Flameng waxaana Xiddigaan aad u doon doonaya kooxo badan oo yurub ah.
Lucas Paqueta oo ah Cayaaryahan khadka dhexe si wanaagsan ayaa u saftay Kooxdiisa Flamengo 81 kulan waxaana dhawr mar isku dayey in ay lasoo wareegaan kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain balse Kaka ayaa u muuqda mid ku Guuleysan doona in uu keeno AC Milan Gaar ahaan bisha Janaayo oo uu dib u furmi doono suuqa kala iibsiga Cayaartoyda.
Xiddigii hore ee AC Milan Kaka ayaa dhawaan loo Magacaabay mid ka mid ah Maamulka kooxdaas waxaana lafilayaa in uu ka Caawin doono Naadigaan in ay yimaadaan Cayaartoy badan Gaar ahaan kuwa u dhashay dalka Braziil waxaana ay wada shaqayn doonaan Leonardo iyo Maldini